Miaraka Mamorona Sary Mahatsikaiky Ao Amin’ny Fianakaviana Mba ho Fanohanana ny Teny Karuk (Ary Mampianatra Izany Amin’ny Zanaka Lahy) · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Febroary 2017 13:50 GMT
Sary mahatsikaiky amin'ny teny Karuk noforonin'i Susan Gehr. Fandikàna: “Inona no olanao?”
Mandray anjara amin'ny Fanambin'ny sary mahatsikaiky amin'ny tenin-dreny i Susan Gehr ary mamorona sary mahatsikaiky amin'ny tenin'ny fianakaviany, ny karuk.
Monina any Blue Lake, tanàna kely ao amin'ny Comté de Wiyot, any Kalifornia i Susan. Sady mpianatra no mpampianatra, mpiasan'ny tranomboky amin'ny fotoana sasany ao amin'ny Kolejy Redwoods izy, ary mikarakara tetikasa roa mifandray amin'ny fiteny sy kolontsaina, tohanan'ny National Science Foundation. Manana tanjona hanampy ny olona miasa ho an'ny fiteny any amin'ireo anjerimanontolon'ny foko iry voalohany mba hanamafy ny fahalalana amin'io taranja io sy ny fahaizan'izy ireo manao fikarohana. Ny an'ilay faharoa kosa dia hamorona tahirinà loharano amin'ny teny karuk mba hahatonga ity teny ity ho mora ifampiresahana sy mora voizina.
Tao anatin'ny tafatafa niarahana tamin'ny Rising Voices, mampahafantatra ny teniny sy manazava ny fandraisany anjara amin'ny fanamby #memeML, izay namoahany ireo sariny mahatsikaiky tao amin'ny kaontiny Twitter @vurayav sy tao amin'ny Facebook izy.
Rising Voices (RV): Inona ny toeran'ny teninao, eo amin'ny fiainana andavanandro sy amin'ny aterineto ?
Susan Gehr (SG) : Ny foko misy ahy, ny Karuk, dia ahitana mpikambana voasoratra anarana maherin'ny 3 700 sy taranaka 4 200 voasoratra anarana. Hatreto, olona enina no fantatro fa karuk no tenin-dreniny. Ho an'i Kalifornia, izay ahitana foko samy hafa maherin'ny zato, ny fisian'ny olona enina velona mitenymisosa tsara ilay teny dia azo heverina ho toy ny vintana. Soa ihany, fa misy ihany koa mpandahateny manana fahaizana antonony, ary mihoatra noho izany ireo Karuk izay mianatra ilay teny. Na izany aza, làlana alaina ora dimy miala ny tanàna no misy ny vondrom-piarahamonin'ireo mpandahateny tena lavitra, miankina tanteraka amin'ny aterineto izahay araka izany isak'izay mivory.
Manana rakibolana sy antontan-dahatsoratra ao amin'ny aterineto ny teninay. Vokatry ny fiarahana miasa tamin'ny foko Karuk sy ny anjerimanontolon'i Kalifornia any Berkley ilay tranonkala. Niarahanay sy William Bright namoaka ilay rakibolana, ary ny Departemantan'ny teny any Berkley no namorona ilay tranonkala sy mbola manohy manampy votoaty ao. Ampiasaina eny amin'ny haino aman-jery sosialy koa ny karuk ary misy rakitsary azo jerena ao amin'ny Youtube sy ny Internet Archive.
RV : Inona ny antony nanapahanao hevitra handray anjara amin'ilay Fanamby sary mahatsikaiky amin'ny tenin-dreny?
SG : Satria mampihomehy ahy ny sary mahatsikaiky! Izaho koa manana zanaka lahy, Logan, izay mamaritra ny tenany matetika ho toy ny Tompon'ny Sary mahatsikaiky ary niteny hoe “Tiako ny sokatra” isaky ny dimy minitra fony ilay rakitsary “I like turtles” lasa nalaza.
Nilaza tamin'ny tenako aho hoe mety ho fomba iray tena tsara hanaovana izay hampiasàny ny karuk izany. Nangataka taminy aho mba hanoro hevitra ahy amin'ny sary mahatsikaikiko manaraka ary manana hevitra foana izy. Avy eo izy manontany ahy ny fomba hitenenako izany amin'ny fiteny karuk. Tsara rehefa mametraka ny fanontaniana izy. Ho tadidiny kokoa raha tsy tereko izy.
Tsaroako ny zavatra iray nianarako tamin'i Zalmai Zeke Zahir nandritra ny atrikasa Breath of Life (Fofonaina), nokarakarain'ny Mpikatroka ho an'ny fitohizan'ny fahaveloman'ny fitenin'ny teratany any Kalifornia. Nangataka taminay izy mba hitady sehatra ho an'ny teny ary hampiasa ny teny amin'io sehatra io foana, na amin'ny resaka nahandro, na hetsiky ny fiarahamonina, ny haza na fanenomana harona. Araka izany, noho izaho mandany fotoana bebe kokoa tao amin'ny Facebook noho ny tokony ho izy, dia nanapaka hevitra aho fa ny Facebook no ho sehatra hampiasako ny teny karuk. Natomboko tamin'ny andianà sarinà kilalao manana endrika sokatra, amin'ny fakàna sary azy ireo, avy eo amin'ny fandikàna amin'ny teny karuk izay eritreretiny na ataony. Ny fanambin'ny sary mahatsikaiky no mandany ny fotoanako rehetra amin'izao, na dia nahavita nanao sary mahatsikaiky vitsivitsy amin'ny sokatra aza aho.
RV : Amin'iza no tianao hanaovana fanamby hamorona sary mahatsikaiky amin'ny teny karuk ?
SG : Te-handrisika ireo namako mpandahateny sy mpianatra ny teny karuk aho mba hamorona sary mahatsikaiky amin'ny teny karuk. Ary te-handrisika ireo Amerikana-Indiana any Kalifornia izay nandray anjara tamin'ilay atrikasa Breath of Life an'ny AICLS na tamin'ny Fandaharanasa mpampianatra-mpianatra asa mba hamorona sary mahatsikaiky amin'ny fitenin'izy ireo.
Fantaro bebe kokoa ireo sary mahatsikaiky mandray anjara amin'ilay Fanamby amin'ny fiteny samihafa eto amin'izao tontolo izao, amin'ny alalan'ny fikarohana ny tenifototra #MemeML ao amin'ny Instagram, Twitter, na ny Facebook. Manana ny vondrony ao amin'ny Facebook koa ilay Fanamby ary mandray ny fandraisana anjara avy amin'izao tontolo izao.
Tantaran'ny Teratany farany
1 andro izayMedia-sôsialy
1 herinandro izayMedia-sôsialy